25 Fon oo Bilaash ah oo Kaamil Ah Noocyada Nooca Nakhshadeeyayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Noocyada noocyada qoraalka ahi weligood kuma filnaan doonaan taas oo aan ka heli karno inaan ku helno buug-gacmeed wanaagsan gacmaheena sidaasna aan ugu heli karno macaamiisha codsanaya adeegyadeena xirfadeed. Shabakadaha shabakadaha waxay bixiyaan adeegyo badan oo kala duwan oo aan ka heli karno shaqooyin dhameystiran oo nooc walba leh.
Markan waan kuu keenaynaa 25 nooc oo bilaash ah oo ku habboon dhammaan noocyada naqshadeeyayaasha iyo inay ka mid noqon karaan liiskaas ay tahay inaad ka gudubto nooc ka mid ah macmiilka oo aad u gudubto mid kale adigoon dareemin xirfad-yaqaannimada aan markasta u qaadan doonno calan ahaan. Waxaan la soconeynaa qaar ka mid ah ilaha ugu dhow ee hadda xayeysiin doona howsha la qabanayo.
1 Muuqaalka Ciyaarta
4 Qoraalka Crimson
10 Saan cad
12 Punk qurux badan
16 Taxadir la'aan
18 Gangsta asalka ah
19 Burush afuuf
20 Nooca Taaga
25 Bilaash Baskerville
Mid ka mid ah noocyadaas casriga ah ee kara si fiican ugu gudubto kuwii qarnigii XNUMXaad. Horumarkeedu wuxuu kujiraa ilo furan sidaa darteed waxaan leenahay cusbooneysiin kaladuwan waqtiga.
Xarfaha casriga ah ee casriga ah waxaa ku dhiirrigeliyay naqshadeynta si aan ugu adeegsan karno baloogyada mowduucyada kaladuwan ee ay aad ugu fiicnaan karto. Farsamo ahaan waxaa loogu talagalay shaashadaha oo sifiican ayuu ugu shaqeeyaa daabacaadda.
Nooca joomatari-slaif-serif oo ah sida kan kore si wanaagsan ayuu ula socdaa shaashadda sida daabacaadda. Waxaa lagu daabacay galka Google Font sida mid bilaash ah. Waxay leedahay culeysyo kala duwan sida kuwa caadiga ah, kuwa hoose, kuwa dhiiran iyo kuwo kaloo badan.
Far kale oo bilaash ah oo laga helo Google Fonts taasi waa diirada saaray wax soo saarka suugaanta markaad ururinayso ilo waqtiyo kale ka yimid. Waa mid ka mid ah noocyadaas oo noqda kuwa ugu jecel naqshadeeyayaasha dhammaystirkiisa iyo quruxdiisa weyn.
Nooc serif ah oo ay dhiirrigelisay Dhaxalka Garamond. Gacanta waxaa ku sawiray Christian Thalmann, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa madaxyo waaweyn, shaashad iyo daabac labadaba. Waxay sidoo kale leedahay tayada si qumman loo akhrin karo cabirro yaryar.
Ilaha tayada leh ee aan ku qaadno boostadan si aan ula kulanno Fenix ​​iyo qoraaladiisa. Ku habboon shaashadda iyo qoraallada dhaadheer, cabirkoodu wuxuu raadinayaa inuu helo boos dherer iyo ballac ah.
Qalab kale oo casri ah oo casri ah oo casri ah. Afarta nooc ayaa dhammaystiraya qoraalkan iyada oo ujeedadu ku jirto madaxyada iyo qoraallada soo saaraysa dareenno firfircoon oo akhriska ah.
Nooc serif ah oo ka mid ah kuwa ugu caansan Google Fonts. Miyuu leeyahay qiimaha leeyihiin Slabo 27px iyo Slabo 13px si markaa cabirkaas uu si fiican uga muuqdo nooc kasta oo dhexdhexaad ah. Mid ka mid ah ilaha moodada hadda jira ee aynaan seegi karin.
Ilaha aan qiimeyn karno sida nooca grotesque Omnibus iyo inay ku timaaddo afar miisaan oo kala duwan: saafi ah, caadi ah, geesinimo iyo madow, iyo sidoo kale farta ku qoran Font xarrago leh oo aan ku soo saari karno boodhadh madaxeedyo fiican leh oo leh Chivo Black.
Ilo badan oo loo qaabeeyey by Intel loogu talagalay akhrinta shaashadda. Waxay sidoo kale ku habboon tahay daabacaadda iyo sidoo kale isticmaalka shabakadda. Font bilaash ah oo u taagan saami ahaan iyo waliba nashqadeyntiisa.
Font ka timid Xarfaha Google ku saleysan naqshadeynta iyo in loo isticmaali karo cinwaannada cinwaannada iyo sidoo kale qaybo yaryar oo ka mid ah baaragaraafyada. Waxaa lagu gartaa xarfaha alifbeetada Latin iyo Cibraaniga.
Punk qurux badan
Nooc madadaalo iyo bilaash ah oo ku habboon shaqooyinka qaarkood ee gaarka ah ee loogu talagalay bilicsanaanta. isaga geesinimadu waa "dhalinyaro" oo leh taabashadaas casriga ah ee hawlaha qaarkood.
Kuleylka laga bilaabo Shisheeyaha Waxyaabaha, waxaan leenahay Paralines iyada oo ah il ururinaysa qayb kamid ah ruuxi siddeetamaadkii. Wanaagsan tahay in lagu daro wax dib u habeyn ah oo markaa bilaash u ah adeegsiga ganacsiga ama isticmaalka gaarka loo leeyahay.
95 jilayaasha gacanta lagu sameeyo si ay u siiso macno gaar ah. Haddii aan raadineyno wax shakhsiyadeed oo dhow, nooca noocan ah ayaa ku habboon in lagu qaato bilaash oo markaa loogu isticmaalo wax ganacsi iyo shaqsi ahaanba.
Haddii aan sameyno nooc ka mid ah farsamadaas taas waxaan ku iibin karnaa Etsy, Playlist waa far gaar ah sababtaas darteed waxaana loola qabsan doonaa in lagu qurxiyo barkimooyinka, koobabka iyo waxyaabo kale oo badan.
Font gacanta lagu abuuray oo ay kujiraan dhamaan xarfaha Latin. Wanaagsan dhammaan noocyada shaqooyinka la xiriirida sahaminta, xiisaha iyo safarka.
Inta gadh badani jiraanWaxaa jiri doona hipsters iyo noocyo sida Betty ku habboon websaydhyada ku xiran daryeelka shakhsi ahaaneed, kiiskan kan hipster ama xitaa tattoos. Font-dhamaadka sare bilaash ah.
Gangsta asalka ah
Font-kan ayaa sharaf sameyn kara dad badan oo farshaxanno ah iyo in sida xaqiiqada ah macmiilka qaar uu awoodi doono inuu weyddiisto. Ku haysashada joornaalka waxay ku imaan kartaa mid waxtar leh si looga baxo dhibaatada, iyo in ka badan hadda.
Ilo dabacsan oo casri ah oo leh khadad hagaagsan oo muujinaya macaan iyo dhalinyaro. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay nooc nooca qoraalka ah ee loo yaqaan 'hip-hop' iyo dhaqanka magaalooyinka oo aad ugu soo kordhaya dabin.
Isla sidaas ayaa loo sameeyaa Tag Type, a qoraal xaraf ah oo wax lagu qoro taasina waxay u taagan tahay firfircoonaanteeda.
Laga soo bilaabo ilaha asalka ah ee ugu badan ee leh a taabasho gaar ah qaanso roobaadka. Midab buuxa, waxay wax khaas ah ku ridi doontaa baloogga ama bogga aad ka shaqeyneyso.
Ilo nooc sans-serif oo u taagan xariiqyadiisa cad. Jaapokki wuxuu ku habboon yahay cinwaannada, boodhadhka iyo astaamaha, waa nooc aad u qaas ah oo gebi ahaanba ah.
Como hadaan tagnay Brasil, ishaani waxay kuu qaadeysaa wax xiiso leh oo tamar buuxda leh. Mid kale oo ka mid ah farta gaarka ah ee sidoo kale raadinaya wax gaar ah si loo muujiyo qoraalka.
Nooc kale oo tijaabo ah oo na qaadanaya wax aan ahayn waxa ilaa hadda la soo sheegay. Waxay kuu haysaa laba pesos si aad u hesho meesha aad ka qaadanaysid.
Waxaan ku dhamaynaynaa a nooc weyn oo loo yaqaan 'Libre Baskerville' taasina waa lafilayaa 16px. Iyada oo ku saleysan 1941 Baskerville, waxay ku shaqaysaa shaashadda si weyn. Waa mashruuc il furan oo ku habboon cinwaanka iyo baaragaraafyada labadaba.
Os waxaan uga tageynaa xarfahaan aadka u wanaagsan ee naqshadeeyayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » 25 nooc oo bilaash ah oo ku habboon dhammaan noocyada naqshadeeyayaasha
Jilayaasha Game of Thrones ee nooca GTA